Iinkqubo zeBentley zandisa iiYilo zoKwakha eziKhonkrithi kunye neMinikelo yamaXwebhu ngokuFunyanwa kwe-S-Cube futuretech -Geofumadas
NgoJanuwari, 2018 Zobunjineli, Microstation-Bentley
Amandla amatsha aphezulu ohlalutyo lwekhonkrithi, ukucwangciswa kunye nezicwangciso zamaphepha
Bentley Systems, ziya- namhlanje isaziso nokufunyanwa kwamaxwebhu software kunye noyilo wenziwe ngesamente esekelwe e Mumbai Inkampani S-Cube Futuretech Pvt. Ltd. Ukongeza izicelo lwandisa nezahlulo ezithile S-Cube Futuretech kunye Bentley Injongo yokufezekisa ukulungelelanisa kuzo zombini iimfuno zobunjineli bekhonkrithi kunye nesofthiwe yomqulu kwi-India, kwi-mpuma ye-Asia kunye neMbindi Mpuma.
Izicelo ze S-Cube Futuretech, kuquka RCDC, RCDC FE, RCDC Plan kunye Steel Autodrafter (Autodiseñador beengxenye intsimbi), ukunikezela izisombululo bhetyebhetye nenamandla ukuba uyilo kunye namaxwebhu ngenxa iinjineli kunye nabayili izakhiwo zezakhiwo eziphathekayo. amaxwebhu automated yalungiselelwa neemfuno zengingqi kwaye ibonelela abasebenzisi ixabiso exhasayo kunye namakhono ukuba iyavumelana izicelo Bentley esisetyenziswa ngokubanzi ezifana nezo zifunekayo ukuze uhlalutyo lwesakhiwo, uyilo intsimbi kunye izicelo BIM Bentley, Staad , RAM kunye AECOsim Building Umzobi.
«Ngaphezulu kwe-2 bhiliyoni yabantu abaya kuhlala kwiidolophu zomhlaba kule minyaka ilandelayo ye-30. Oku kukhula kuya kuqhubeka kugxilwe kwiimarike eziphuhlisayo zase-Asiya, ngakumbi iIndiya, China kunye namazwe akumazantsi mpuma Asia. Uyilo olusebenzayo, oluzenzekelayo lwekhonkrithi kunye nezixhobo zenkcukacha ziya kuba luncedo kwisizwe ngasinye ukufezekisa le mfuno »
Wathi uRaoul Karp, oyiNtloko kaMongameli we-Bentley Design Engineering Analysis.
Ukususela kwi-2014, i-Bentley Systems kunye ne-S-Cube baye basebenzisana kunye nokuphuhlisa uhlalutyo oluchanekileyo oluchanekileyo kunye nokuyila. Ukufunyanwa lidibanisa isiseko solwazi S-Cube kunye namaqela achaphazelekayo leengcali Bentley, abamele iminyaka yamava ezidityanisiweyo kolu shishino ukunika isimo ubuciko noshowo design and analysis nobuchwepheshe.
«Siyavuya ukujoyina iqela leengcali ezivela kwa-S-Cube, obuchwephesha buqinisekisiweyo bobuchwephesha bokuqulunqwa kwekhonkrithi kunye nomzobo oqhubayo kubasebenzisi bethu boMyili weSaad, RAM kunye neAECOsim. I-S-cube izisa amava amaninzi ekunikezeleni uyilo lekhonkrithi kunye nokuzoba i-automation kwiimarike zaseIndiya, kwi-Middle East, nakwi-Southeast Asia »
utshilo uSantanu Das, uSekela Mongameli oMkhulu woBunjineli boBunjineli eBentley.
USajit Nair, i-CEO ye-S-Cube futuretech uthe, "Njengenkokheli yehlabathi kuhlalutyo lobume kunye noyilo lwendawo, i-Bentley izisa imeko ye-BIM yobuchwephesha kunye nobuchwepheshe bohlalutyo lobuchwephesha, i-ethos egxile kubasebenzisi, kunye amava Imakethi yehlabathi eza kunceda ukukhulisa izisombululo zethu kwintengiso ebanzi. Sivuya kakhulu malunga nokubonelela ngokusebenza ngakumbi kunye nezakhono kubasebenzisi abaninzi kwihlabathi liphela, ngexesha elifutshane kunelo besinokuthi silifumane ngenye indlela.
Malunga ne-S-Cube Futuretech
Futuretech S-Cube yasekwa ngo 2012 liqela iinjineli eguquguqukayo lowo umbono kunye nenkolelo ukuba nako iinguqu kwindlela olusebenza iinjineli. Injongo yaso ephambili kukuyila nokuphuhlisa ukuhlanganiswa kweekhompyutha kunye nezisombululo ezenziwe ngokuzenzekelayo ezisekelwe kwisofthiwe yezobunjineli. Ukufumana olunye ulwazi, tyelela www.s-Cube.in.
Bentley Systems ihamba phambili kwihlabathi ekuboneleleni iinjineli, abakhi, iingcali geospatial, abakhi, kwaye umnini-abaqhubi izisombululo software epheleleyo phambili imisebenzi yoyilo, ukwakhiwa kunye nezibonelelo. Abasebenzisi baseBentley basebenzisa ngokunxulumene nokuhamba kolwazi phakathi koqeqesho nakwixesha lojikelezo lweziseko ukwenzela ukuba banikele ngeeprojekthi kunye nefa kunye nokusebenza okungcono. Izixazululo zeBentley ziquka izicelo ze MicroStation kwi ulwazi lohlobo, iinkonzo zentsebenziswano ProjectWise ukunikela iiprojekthi ezidibeneyo kunye neenkonzo zokusebenza AssetWise ukufezekisa izixhobo ezinengqiqo, ezizaliswe ziintlobo ezininzi zeenkonzo ezilawulwayo zibonelelwa ngeenkqubo eziyimpumelelo.
Yasekwa ngonyaka ka-1984, Bentley ezingaphezu kwe oogxa 3.000 50 kumazwe angaphezu, ngaphezu $ 600 yezigidi kwengeniso ngonyaka, kwaye ukusuka 2011 utyale ngaphezu $ 1 billion kuphando, uphuhliso kunye ukuzuza. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga Bentley, tyelela www.bentley.com.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Izizathu ezilishumi eziphambili zokwenza idatha yendawo
Post Next Faka imephu kwi-Excel-fumana ulungelelwaniso lwejografi- ulungelelwaniso lwe-UTMOkulandelayo »